၉ အနိမ့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများ [Hypothyroidism]
နိမ့်ဇီဝြဖစ်၏9အစောပိုင်းလက္ခဏာများ
29 / 11 / 2018 /0 မှတ်ချက်/i ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်/av ရေတံခွန်
၉ အနိမ့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု (Hypothyroidism) ၏အစောပိုင်းလက္ခဏာများ
Hypothyroidism (ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနည်း) သိုင်းရွိုက်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအခြေအနေသည်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးပြုပြင်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ သင့်ကိုဤအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေသည့်ရောဂါလက္ခဏာကိုစောစောစီးစီးသိရန်ခွင့်ပြုသည့်အစောပိုင်းလက္ခဏာ (၉) ခုကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။
သိုင်းရွိုက်ဂလင်းဟာ trachea ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာလည်ပင်းရဲ့အရှေ့ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ ဤဂလင်းသည်ကြီးထွားမှု၊ ပြန်လည်ပြုပြင်မှုနှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုထိန်းညှိပေးသောသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများကိုထုတ်ပေးသည်။ ဤဟော်မုန်း၏အလွန်နိမ့်သောအဆင့်များတွင်၎င်းသည်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်လက်တွေ့လက္ခဏာများများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် hypothyroidism ၏အစောပိုင်းလက္ခဏာနှင့်လက္ခဏာ ၉ ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာမင်းကိုအံ့အားသင့်စေမှာသေချာတယ်။ ဆောင်းပါး၏အောက်ခြေတွင်အခြားစာဖတ်သူများထံမှမှတ်ချက်များကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
အနိမ့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၏လက္ခဏာနှင့်အထင်ရှားဆုံးလက္ခဏာမှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကထုတ်ပေးသောဟော်မုန်းများသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိစွမ်းအင်မျှတမှုကို (ပုံမှန်အားဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာရှိဓာတ်ဆီနှင့်တူသည်) ကိုထိန်းညှိရန်တိုက်ရိုက်ကူညီပေးသည်။
ဒီသုတေသန -based ဥပမာကိုအသုံးပြုရန် - ထို့နောက်အခြားအရာများထဲမှဆောင်းရာသီအတွက် hibernation သို့သွားသောတိရိစ္ဆာန်များသည်ဤ ကြိုတင်၍ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းပမာဏအလွန်နည်းသည်။
ဤဟော်မုန်းပမာဏမြင့်မားသောသူများသည်များသောအားဖြင့်အာရုံကြောများနှင့်မငြိမ်သက်မှုများကိုခံစားရလေ့ရှိသည်။ တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ နိမ့်ကျသည့်လူများသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ပင် ၀ မ်းနည်းခြင်းနှင့် ၀ မ်းနည်းခြင်းများကိုခံစားရလိမ့်မည်။ နောက်အုပ်စုတစ်စုသည်လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုခံစားချက်များကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: Osteoarthritis ကြောင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည့်နည်းလမ်း ၇ ချက်
မမျှော်လင့်ဘဲကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းသည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၏နောက်ထပ်လက္ခဏာလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် hypothyroidism သည်လူတစ် ဦး ကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေပြီးအားလျော့စေသည့်အပြင်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းမှုနည်းခြင်းကြောင့်လည်းခန္ဓာကိုယ်အားအသည်း၊ ကြွက်သားများနှင့် adipose တစ်ရှူးများမှကယ်လိုရီကိုထိန်းသိမ်းရန်တောင်းဆိုစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုလျှော့ချပြီးမီးတောက်ထဲသို့ကျစေသည်။
သင်ဟာကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာတာကိုခံရရင်တောင်သင့်အစားအစာဒါမှမဟုတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုမပြောင်းလဲဘူးလို့ခံစားရရင်တောင် - ထို့နောက်၎င်းသည်သင်၏မိသားစုဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးသင့်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သူသည်သင့်အားကူညီနိုင်မည့်အများပြည်သူဆိုင်ရာလက်တွေ့အာဟာရပညာရှင်ထံသင်ပို့ပေးနိုင်သည်။
လူများစွာသည်နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုပျက်စီးစေသည့်နာတာရှည်နာကျင်မှုနှင့်နာမကျန်းမှုများကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသည် ဒါကြောင့်ငါတို့ကမင်းကိုအားပေးတယ် ဤဆောင်းပါးကိုလူမှုမီဒီယာတွင်မျှဝေပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါ နှင့် "နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုသည်" ဟုပြောပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်ဤရောဂါလက္ခဏာနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုမြင်သာအောင်ပြုလုပ်ပြီးလူအများအပြားကိုအလေးအနက်ထားရန်လိုအပ်သည် - ထို့ကြောင့်သူတို့လိုအပ်သောအကူအညီကိုရနိုင်သည်။ ဤသို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်းသည်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းနည်းလမ်းအသစ်များအတွက်သုတေသနအတွက်ပိုမိုရန်ပုံငွေရရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
မင်းကအမြဲတမ်းအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်လား။ ၎င်းသည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အပူသည်ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှု၏ဘေးထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်ကယ်လိုရီများစွာကိုလောင်ကျွမ်းသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ပူလာသည်။
သင်ထိုင်သောအခါ၌ပင်အချို့သောကယ်လိုရီများကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနိမ့်ကျသောအခါအမှန်တကယ်အခြေခံလောင်ကျွမ်းခြင်းသည်ကျဆင်းသွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပိုမိုမြင့်မားသောဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ပုံမှန်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုတို့ဖြင့်အခြားသူများထက်အပူလျော့နည်းစေသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ထိုကဲ့သို့သောအအေးမိခြင်းနှင့်အမြဲတမ်းအအေးမိခြင်းဟူသောခံစားချက်သည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်ဖန်တီးထားသည့်ပုံစံလည်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်သတိပြုသင့်ပြီး၎င်းသည်သင်နှင့်နေထိုင်သောသူများထက်အနည်းငယ် ပို၍ နွေးထွေးမှုကိုသာရလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်အခါ hypothyroidism ရှိခြင်းအန္တရာယ်တိုးလာသည်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအခြားဆဲလ်များစွာနည်းတူဆံပင် follicles ကိုလည်းသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများကထိန်းညှိပေးသည်။ မကြာခဏအထွက်နှုန်းနှင့်တိုတောင်းသောသက်တမ်းတိုသောအပင်ဆဲလ်များရှိဆံပင် follicles သည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသဖြင့်ထိခိုက်လွယ်သည်။
တကယ်တော့၊ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းမှုနည်းခြင်းကြောင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည် - ဒါကဆံပင်ကျွတ်တာကိုဖြစ်စေတယ်။ အကယ်၍ အခြေခံပြproblemနာကို - ဥပမာအားဖြင့်ဆေးနှင့် - ကုသလျှင် - ဆံပင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြန်ပေါက်လာလိမ့်မည်။
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုခံစားနေရသောလူများ၏ ၃၀ မှ ၄၀% ခန့်သည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤသည်ပိုကြီးတဲ့သုတေသနလေ့လာမှုပြသထားတယ် (1) ။ သင်၏ဆံပင်ပါးလွှာလာပြီးအရင်ကဲ့သို့မကြီးထွားလာသည်ကိုရုတ်တရက်သင်တွေ့ရှိရလျှင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနိမ့်ကျမှုကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။
ဆံပင် follicles များကဲ့သို့ပင်အရေပြားဆဲလ်များတွင်မကြာခဏအစားထိုးခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုတောင်းခြင်းရှိသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများကထိန်းချုပ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆင့်နိမ့်ခြင်းသည်အရေပြားသို့အချက်ပြပျောက်ဆုံးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် - ၎င်းသည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။
၎င်းသည်ပုံမှန်အရေပြားဆဲလ်များအစားထိုးခြင်းနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်သာမန်အရေပြားသံသရာကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနည်းသူများသည်အရေပြားရှိအနာများပျောက်ကင်းစေရန်ပိုမိုကြာရှည်ကြောင်းတွေ့ရှိရပေမည်။ အသားအရေပြင်ပအလွှာများသည်မကြာခဏအစားထိုးမှုနည်းပါးသောကြောင့်အစားထိုးခြင်းမပြုမီပိုမိုဖိစီးမှုနှင့်ပျက်စီးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ရလဒ်သည်မကြာခဏခြောက်သွေ့ပြီးမွှေသောအရေပြားဖြစ်သည်။
ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနည်းသူများနှင့်အရေပြားပြောင်းလဲခြင်းသည် myxedema ဖြစ်သည်။ ဤသည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အနီအရေပြားအဖုအဖြစ်တွေ့ရမယ်။
ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနိမ့်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများပျံ့နှံ့ခြင်းတို့အကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ သုတေသီများကယုံကြည်သည်မှာ hypothyroidism သည်စွမ်းအင်ကိုလျော့နည်းစေပြီးလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဆန္ဒကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ၎င်းကဘေးဒဏ်သင့်သူအားကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကိုမကောင်း၊
၎င်းသည်ကာယလှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်ဘဝအပါအ ၀ င်အသက်တာ၏ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှကျော်။ သွားသည်. အမှန်မှာ၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနိမ့်ကျသူများစွာသည် hypothyroidism ကြောင့်သူတို့၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ပြင်းထန်စွာသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုတွေ့ကြုံခံစားကြရသည်။
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့သည်သင်၏မိသားစုဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုရန်အကြောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏စိတ်ဓာတ်ကျမှုသည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနည်းပါးပါကသင်ဆေးမသောက်မီနှင့်အခြေအနေအတွက်မှန်ကန်သောဆေးဝါးကုသမှုခံယူသည်အထိတိုးတက်မှုမရှိနိုင်ပါ။
ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနိမ့်ကျခြင်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှစွမ်းအင်ရရှိပုံကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေသည်။ အဲ့တာကကြွက်သားတွေတစ်သျှူးတွေပျက်စီးစေတယ်။ ၎င်းသည်ထိခိုက်နစ်နာသောကြွက်သားများကိုနာကျင်စေပြီးအားနည်းခြင်းကိုပိုမိုခံစားရစေနိုင်သည်။
၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်ဝေးကွာသည် - ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနိမ့်ကျသူများနှင့်ကြွက်သားများနာခြင်းနှင့်အဆစ်နာခြင်းများဖြစ်ပွားခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ ကြွက်သားမျှင်များ၌ဖြစ်ပေါ်သောဤကြွက်သားပြိုကွဲမှုကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်းများမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
ကြွက်သားများပြိုကွဲခြင်းကြောင့်အဆစ်များကိုတိုးပွားစေသည် - အလှည့်၌ hypothyroidism နှင့်အတူသူများအကြားပိုမိုအဆစ်နာကျင်မှုစေပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနှေးကွေးစေရန်သင်နေ့စဉ်ဘဝတွင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိုပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ အောက်တွင်သင်လွယ်ကူသောလေ့ကျင့်ခန်းအချို့အတွက်အကြံပြုချက်နှင့်အခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များပါရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ်နှင့်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အောက်ပါဗီဒီယိုသည်တင်ပါးဆုံရိုး၏အရိုးပွရောဂါအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းဥပမာတစ်ခုကိုပြသသည်။ မင်းတွေ့တဲ့အတိုင်း၊ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။
၈။ Brain Fog နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအခက်အခဲများ
သင်၏ ဦး ခေါင်းသည်အပြည့်အဝဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းသင်မကြာခဏတွေ့ရှိသလား။ သို့မဟုတ်သင်အာရုံစူးစိုက်မှုပြhavingနာရှိပါသလား ၎င်းကိုမကြာခဏ ဦး နှောက်မြူဟုခေါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာထိခိုက်နစ်နာသူသည်အာရုံစူးစိုက်မှုအခက်အခဲ၊ ယာယီမှတ်ဥာဏ်အခက်အခဲများနှင့်အထွေထွေအတွေးလှုပ်ရှားမှုကိုကြုံတွေ့နိုင်သည်။
ဦး ခေါင်း၌လုံးဝမပါ ၀ င်ကြောင်းတွေ့ကြုံခံစားရန်မှာမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည်. အမှန်မှာဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနည်းပါးသော ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်သူတို့၏သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ကြုံခဲ့ပါက၎င်းကိုသင်၏ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ သူသည်လိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးထိုလက္ခဏာများကိုသင်အဘယ်ကြောင့်တွေ့ကြုံရကြောင်းသိရှိရန်ရှေ့လမ်းတွင်ကူညီနိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး Levaxin သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောစီမံခန့်ခွဲမှုအရအများစုသည်သူတို့၏ပုံမှန်မှတ်ဉာဏ်နှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကိုပြန်လည်ရရှိကြသည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: - သုတေသန - ဤသည် Fibrous Fog ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်
ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနည်းခြင်း (hypothyroidism) သည်သင်၏အူသိမ်အူမ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းချို့တဲ့သောအူသိမ်လုပ်ဆောင်မှုသည်စွမ်းအင်နှင့်အာဟာရဓာတ်များစုပ်ယူမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သုံးသပ်ထားသောလက်တွေ့လက္ခဏာများမှသင်မြင်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုနိမ့်သည်ကိုယ်ခန္ဓာလုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးတွင်“ မမြင်နိုင်သောဘရိတ်” ကိုလုံးဝနီးပါးထည့်ထားသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။. လူအများစုကသူတို့၏မိသားစုဆရာဝန်နှင့်ပြtheနာမဖြစ်စေဘဲရှည်လျားလွန်းလှသည် - ထို့ကြောင့်မှန်ကန်သောဆေးဝါးမရရှိဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေရသည်။
ဤအရာသည်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်၏ဆရာဝန်နှင့်အမှန်တကယ်ဆွေးနွေးခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုနည်းဖြင့်သင်သည်သွေးစစ်ဆေးမှုကိုတိုးချဲ့နိုင်ပြီးအခြေအနေကိုမည်သို့စစ်ဆေးနိုင်သည်။ မင်းလုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အုပ်စုသို့«အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှု - နော်ဝေ - သုတေသနနှင့်သတင်း»အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာတာရှည်ရောဂါများနှင့်ပတ်သက်သည့်သုတေသနနှင့်မီဒီယာဆိုင်ရာနောက်ဆုံးရေးသားချက်များအတွက် ((ဒီမှာနှိပ်ပါ) ။ ဤနေရာတွင်အသင်း ၀ င်များသည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများနှင့်အကြံဥာဏ်များဖလှယ်ခြင်းဖြင့်တစ်နေ့တာအချိန်မရွေးအကူအညီနှင့်အထောက်အပံ့များရနိုင်သည်။
တနည်းကား, ငါတို့ချင်တယ် ဒီဆောင်းပါးကိုလူမှုရေးမီဒီယာဒါမှမဟုတ်သင့်ဘလော့ဂ်ကနေတစ်ဆင့်မျှဝေဖို့ကောင်းကောင်းတောင်းပါ (ဆောင်းပါးနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန်အခမဲ့ခံစားရ) ။ နားလည်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်းသည်နာတာရှည်ရောဂါရှိသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်ဘဝဆီသို့ ဦး တည်သည့်ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/TIDLIGE-TEGN-PÅ-STOFFSKIFTE.jpg?media=1648573622 368 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2018-11-29 21:48:342021-03-31 15:53:48နိမ့်ဇီဝြဖစ်၏9အစောပိုင်းလက္ခဏာများ
၇ လက်အတွင်းရှိအရိုးအဆစ်နာဆန့်ကျင်လေ့ကျင့်ခန်း5Fibromyalgia နှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်း